ခေါင်းလေး တမော့မော့ .. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခေါင်းလေး တမော့မော့ ..
ခေါင်းလေး တမော့မော့ ..
Posted by weiwei on Nov 5, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 41 comments
အခုတလော သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုက ခေါင်းတမော့မော့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ … ဘယ်အချိန်ကစပြီး ခေါင်းမော့သွားလဲဆိုတာ သတိမထားမိခဲ့ပေမယ့် သတိထားမိချိန်မှာ တော်တော်လေးမော့နေပြီ။
ငယ်ငယ်လေးထဲက ဘယ်တော့မှ ခေါင်းမမော့ပဲ အောက်ကိုချည်းငုံ့ကြည့်နေတတ်ခဲ့တာ။ လူတောမတိုးသလိုလို၊ ကြောက်သလိုလိုနဲ့ ခပ်ရွံ့ရွံ့နေတတ်ခဲ့တယ်။ အမြဲတမ်း ခေါင်းငုံ့ပြီး လမ်းလျှောက်တယ်။ စာဖတ်ရင်လဲ ငုံ့ကြည့်ပြီး ဖတ်ခဲ့တယ်။
အခုနောက်ပိုင်း လမ်းလျှောက်ရင်လဲ ခေါင်းတမော့မော့၊ ကွန်ပျူတာကြည့်လဲ ခေါင်းတမော့မော့၊ စာအုပ်ဖတ်လဲ စာအုပ်ကိုထောင်ပြီး ခေါင်းမော့ဖတ်လေ့ရှိနေပြီ။
တရားခံက မျက်မှန်ဖြစ်နေတယ်။ ငယ်ငယ်ထဲက မျက်စိပါဝါများလို့ မျက်မှန်တပ်ခဲ့ရပေမယ့် ဘာမှမသိသာခဲ့။ ဒီအတိုင်းမျက်မှန်တပ်လိုက်ရင် အားလုံးမြင်နေရတယ်။ အဝေးကြည့်ကြည့် အနီးကြည့်ကြည့် အားလုံးအိုကေခဲ့တယ်။ ပြသနာစဖြစ်ခဲ့တာက လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်က မျက်မှန်တပ်ပေမယ့် အနီးကြည့် အထူးသဖြင့် ကွန်ပျူတာကို ကောင်းကောင်းမမြင်ချင်တော့၊ စာအုပ်ထဲကစာကို မဖတ်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီတော့ မျက်စိဆရာဝန်က အနီးကြည့်ပါဝါရှိလာလို့ အနီးကြည့်မျက်မှန်ပါ လိုလာပြီလို့ ပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ အဝေးကြည့်မျက်မှန်တစ်လက်နဲ့ အနီးကြည့်မျက်မှန်တစ်လက် လုပ်လိုက်တယ် (ကျွန်မနှင့် မျက်မှန်များ) ဆိုပြီး ပို့စ်တစ်ခု ရေးတင်ခဲ့ဖူးသေးတယ်။ မျက်မှန် ၂ လက်နဲ့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ သွားလေရာမှာ မျက်မှန်ကျန်ခဲ့တဲ့ပြသနာနဲ့ အိမ်ကလူတွေကိုပါ ဒုက္ခပေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရုံးကိုရောက်ပြီးမှ အနီးကြည့်မျက်မှန် အိမ်မှာ မေ့ကျန်ခဲ့ရင် အဲဒီနေ့ ပြသနာတက်ပြီပဲ။ ဘာမှ လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ ကိုယ်တိုင် အိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီး မျက်မှန်ပြန်ယူရတယ်။ အိမ်နဲ့ရုံးနဲ့နီးလို့ တော်သေးပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ သန်လျင်သွားပြီး အဲဒီမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ အိမ်ကအဖေလုပ်သူက ရုံးအထိလိုက်လာပြီး ပေးရတာဖြစ်ဖြစ်၊ တက်စီတစ်စီးကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ပို့ခိုင်းတာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရပါတော့တယ်။ မျက်မှန်ကို ချွတ်လိုက် တတ်လိုက်ပြသနာကလဲ တော်တော်ဒုက္ခကြီးလာတယ်။ အဲဒါနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့် multi focal လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။ တစ်လက်ထဲနဲ့ အားလုံးကြည့်နိုင်မယ်ဆိုတော့ အိုကေတယ်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် သူ့မှာလဲ သူ့ပြသနာနဲ့သူ။ တကယ်မျက်မှန်လုပ်တော့ ပါဝါများတဲ့အတွက် မှန်လုပ်ရတာ အခက်အခဲကြောင့် ပုံမှန်ထက် ၅ ဆ လောက် (မှန်ဖိုး ၂ သိန်းဝန်းကျင်) ဈေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ အိုကေလုပ်မယ်ဆိုပြီး လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ တကယ်လုပ်ပြီးတော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ multi focal ရဲ့ သဘောတရားက မျက်မှန်တစ်ဝိုင်းထဲမှာ focus သုံးခု ထည့်ထားတာဆိုတော့ အဝေးကြည့်အတွက် အပေါ်မှာ ကွန်ပျူတာလိုမျိုး အလတ်ကြည့်အတွက် အလယ်နဲ့ စာကြည့်ဖို့အတွက်က အောက်ဖက်မှာ ထည့်ထားတာ။ focus ကိုမိမှ သေချာမြင်ရပြီး focus လွဲတာနဲ့ ခေါင်းမူးပါတယ်။ ဘေးကိုကြည့်ချင်ရင် မျက်နှာကို လှည့်ပြီးမှ ကြည့်လို့ရတယ်။ ပထမပိုင်း အကျင့်မရတာနဲ့ အဆင်မပြေပေမယ့် မျက်မှန် ၂ လက်ဒုက္ခတော့ အေးသွားတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၆ လ လောက်ကြာလာတော့ ပြသနာတက်ပြန်တယ်။ မျက်မှန်ကိုင်းက ပျော့တဲ့အတွက် လည်ထွက်ချင်လာတယ်။ လက်နဲ့အတင်းပြန်တည့်ပြီး focus မိအောင် ပြန်ချိန်ပြန်တော့ ပိုဆိုးရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ကိုင်းပါ ကျိုးထွက်သွားတဲ့အထိပဲ။ အဲဒီဆိုင်က လုပ်တာ မကောင်းလို့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး နောက်ထပ်တစ်ဆိုင်ပြောင်းပြီး သွားပြန်လုပ်တယ်။ အဲဒီမှာ မှန်ဖိုးချည်းပဲ ၅ သိန်းကျမယ်လို့လဲ ပြောလိုက်ရော မျက်စိတောင်ပြာသွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ အရင်မှန်ကို ပြန်သုံးပြီးထည့်လို့ရတဲ့ ကိုင်းတစ်ခုခုရှာပြီး ထည့်လိုက်မယ်လို့ပဲ ဆုံးဖြတ်ပြီး ကိုင်းအညံ့လဲ မသုံးရဲတော့တဲ့အတွက် အကောင်းစားကိုင်းတစ်ခုနဲ့ focus ပြန်မိအောင်ချိန်ပြီး တပ်ဖြစ်သွားပါတယ်။
အဲဒီတော့ နောက်ထပ်ပြသနာက ပါဝါချိန်းလာတာပဲ။ အသက်အရွယ်အရ ပါဝါဆိုတာက အဝေးကြည့်လျော့ပြီး အနီးကြည့် တိုးတတ်တဲ့သဘာဝဆိုတော့ … အခုလို ခေါင်းတမော့မော့ဖြစ်ရတဲ့ တရားခံကို တွေ့သွားပါတယ်။
အဝေးကြည့်လျော့လာတဲ့အခါ လက်ရှိအဝေးကြည့်ပါဝါက အရင်ကလုပ်ထားတဲ့ အနီးကြည့်ပါဝါနဲ့ သွားတူသွားတယ်။ အဲဒါကြောင့် မျက်စိက အဝေး focus နဲ့ဆိုရင် ကြည့်မကောင်းတော့ပဲ အနီးက focus နဲ့ အဝေးကိုကြည့်ရင် ပိုပြီးကောင်းတာကို မျက်စိက အလိုလိုသိနေတဲ့အတွက် အောက်က focus နဲ့ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ခေါင်းမော့သွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အနီးကြည့်အတွက်ကတော့ ခေါင်းမော့နေတာတောင် ကောင်းကောင်းမမြင်ရလို့ ထပ်ထပ်ပြီးမော့ရင်း အခုတလော မျက်နှာကျက်တောင်မြင်ရတော့မလောက် ခေါင်းမော့သွားပါတော့တယ်။
ဒီလောက်တောင် သိသာလာပြီဆိုတော့ မတတ်နိုင်တော့လို့ နောက်ထပ် မျက်စိထပ်စမ်းပြီး အသစ်တစ်ခု ပြန်လုပ်ရပါတော့တယ်။ မျက်မှန်တစ်ခါလုပ်တိုင်း သွေးတိုးရောဂါ တစ်ခါဖြစ်ရတာမို့လို့ မျက်မှန်ကို အလွန်စိတ်နာတယ်။ မျက်မှန်အသစ်မရသေးခင် မျက်စိကို အနားပေးမယ်စိတ်ကူးထားပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ ဒုက္ခအပေးဆုံး မျက်စိကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ကြီးစွာဖြစ်ရပါတယ်။
ခေါင်းမော့ရလွန်းလို့ လည်ပင်းလဲ တော်တော်ညောင်းနေပြီ ..
အခုနေ ဘာဖြစ်ချင်လဲလို့ မေးလာရင် … မျက်မှန်မတပ်ရပဲ အားလုံးကို မြင်ချင်တယ်လို့ပဲ ဖြေချင်ပါတယ် …
လူတိုင်းလူတိုင်း အကောင်းဆုံး စက္ခုအာရုံကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း …..
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကျော်လောက်က ကျွန်မနှင့် မျက်မှန်များဆိုပြီး ရေးခဲ့တာလေး ပြန်ရှာလိုက်တယ် ..
ကျနော်လည်း မျက်မှန်သမား ၊ အနီးကော အဝေးကော ၊
ပါဝါသိပ်မများလို့ တော်သေး ၊ အဝေး ၁၅၀ ၊ အနီး ၁၀၀ ၊
အဲလို ဘိုင်ဖိုကယ်နဲ့ လုပ်ထားတာ ၊ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ တိုးခွေ့ရင်း အောက်ကျကျိုး
၄ သောင်းလောက် ကျမယ်ဆိုလို့ ၂၅၀၀ တန် အနီးတစ်လက် အဝေးတစ်လက်နဲ့ စခန်းသွားနေဆဲပါ ၊
မျက်မှန်ကိုင်းဈေးက အတော်များသဗျာ ၊
အခုတော့ အလုပ်ရှုပ်ပေမယ့် ၂ လက်ပေါင်း ၅၀၀၀ နဲ့ အိုကေနေဆဲ ၊
ကျွန်မက ပါဝါ ၆၀၀ လောက်နဲ့ စလင်ဒါပါပါတော့ မှန်ကို ဒီအတိုင်းလုပ်လို့မရဘူး .. high index နဲ့ ပါးအောင်သွေးရတဲ့အတွက် ပါဝါပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးကြီးပါတယ် .. အဲဒီလိုမလုပ်ရင်လဲ ပုလင်းဖင်ကြီးတပ်ထားသလို ရုပ်ဆိုးမှာမို့လို့ …
အဲဒီ ဆု က အနော် ဒီ ဘဝ မပြည့်တော့ဘူးးး
လူက မျက်မှန်မပါရင် မမြင်ရတော့ မျက်လုံးလေး စင်းပြီး ကြည့်ရတာ။
တောက်ညင်ကပ်တဲ့သူ အမြင်ကြ မထီတထီရုပ်ပေါက်နေရော။
ပြီးတော့ လမ်းမှာ ဆို အသိကို မမြင်ဘူးးး
မျက်မှန်ကိုင်း ခိုင်ခိုင် ကိုပဲကြိုက်တယ်။
အသက် ၄၀ ကျော်လာရင် လူတိုင်းလိုလို ကြုံရတဲ့ ဒုက္ခတွေမို့လို့ ဗဟုသုတလဲရအောင် စိတ်ညစ်နေတာကိုလဲ ဖြေဖျောက်ရာရောက်အောင် ရေးထားလိုက်တာ ..
အခုနောက်ဆုံးလုပ်ထားတဲ့ကိုင်းက ကျွဲကော်ကိုင်းလိုမျိုး ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့နဲ့ ပေါ့တဲ့ဟာ ရွေးထားတယ် …
မျက်မှန်တပ်ကြည့်လဲ မျက်စိသေပြီး မမြင်ချင်တဲ့သူကို မမြင်ဘူး ..
သူများတွေက မာနကြီးထင်အထင်ခံရတယ် .. ဒါပေမယ့် တကယ်မမြင်တာ …
.ကျုပ်မလဲ မျက်မှန်ဒုက္ခ မသေးဘူးဗျ..ခဏခဏပျောက်…မျက်မှန်ဖိုးချည်းမနဲကုန်နေပြီ
.အဝေးက ဆလင်ဒါပါပါတော့ လမ်းဘေးကလည်းဝယ်တတ်လို့မရ..သေချာလုပ်မှအဆင်ပြေတာ
အနော် ခု အသက် ၃၀ ပြည့်တော့မယ်.. ကွန်ပျူတာ သမား … မျက်မှန်တက်ရသေးဘူး… ကြည့်တာ ( စာကြည့်တာ၊ ကွန်ပျူတာကြည့်တာ၊ အကုန်ပေါ့ ) ကြည့်နည်းများလွဲနေသလားပဲ… အကြည့်လွဲပြီး အထိုင်လွဲရင် ဖြစ်တတ်သေးတာက ကျီးပေါင်း… အခုပုံစံဆို နေထိုင်တဲ့ ပုံစံကို မမှန်တော့ဘူးလားပဲ… မြင်ရဖို့အတွက် လုပ်ရင်း ပုံစံမမှန်တဲ့ နေနည်းနဲ့ဆို ကျီးပေါင်း ဖြစ်နိုင်လို့ သတိထားဖို့ပဲ မှာလိုပါတယ်… အခုထိ လုပ်မိနေတာက ဟင်းသီးဟင်းရွက် များများစားပါတယ်.. အစိမ်း၊ အ၀ါများတဲ့ အရာ… အနီးကို နာရီဝက်လောက် ကြည့်မိထားရင် အဝေး ဖြစ်နိုင်ရင် အစိမ်းပါတာလေးတွေကို ပြန်ကြည့်စေချင်ပါတယ်.. အိပ်ရင်း စာဖတ်တာ ( ဖုန်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ စာအုပ်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ်) … ရှောင်ရပါမယ်… စာနဲ့ မျက်လုံး လဲ မနီးကပ်ရပါဘူး… မျက်စဉ်းတော့ မှီဝဲပါ… ဒါဆို ပါဝါ မတိုးလောက်တော့ဘူး ထင်ပါတယ်…
ပါဝါ တိုးတာ လျော့တာက ပြသနာမဟုတ်ဘူး .. မျက်မှန်တပ်လိုက်လို့ အဆင်ပြေရင် ဖြစ်ပါတယ် ..
ခက်တာက အနီးအဝေးနဲ့ ကွန်ပျူတာ ၃ ခု အဆင်ပြေမယ့် မျက်မှန်အတွက် မလွယ်တာကို ရှင်းပြချင်လို့ ..
မျက်စိဆိုတာမျိုးက ဆေးသောက်လို့ ရနိုင်တာမဟုတ်လို့ ..
အဲလိုလား.. ဟီး.. အနောလဲ မလျှောက်တတ်တော့ဘူး…
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်.. အခုကြာသပတေး.. မျက်မှန်သွားလုပ်ဖို့.. ချိန်းထားသဗျ..။
ဈေးက ၄၉ဒေါ်လှ…နဲ့ .. ကူပွန်ရသမို့သွားလုပ်တာပါ..။ တန်ကြေးက.. ၅၁၉ဆိုပဲ..။
ဂိုင်းရယ်.. မှန်ရယ်.. သေသေချာချာရွေးဦးမှာမို့.. ဘယ်လောက်ထပ်ကျမလည်းမသိ..။
$49 for an eye exam and $225 towardacomplete pair of glasses, plusasecond pair of frames valued at up to $199 ($519 value)
ကွန်ပြူတာလုပ်ရင်.. မျက်မှန်မလို..။ မော်နီတာရဲ့.. ဆဲလ်လေးတွေတောင်မြင်ရသေး..။
ယူအက်စ်မှာတော့.. မျက်မှန်မတတ်ချင်ရင် မျက်ကပ်မှန်တတ်သူနဲ့..
လေဆာနဲ့သွားပြီး … ပြန်ချိန်တဲ့သူနဲ့.. ပြဿနာမရှိ.. အိုကေတယ်ပြောကြတာပဲ..။
အသိ.. စစ်သားတယောက်များ.. တပ်ကပြန်လာပြီး.. အပြင်ခဏလေးကားမောင်းထွက်.. ပြန်လာတော့..
အဲဒီလေဆာပညာ.. မြန်မာပြည်မှာ.. မလုပ်ကြသေးဘူးလား.. မသိ..။
..ရန်ကုန်မှာ အိုင်ကျူဗီးရှင်းမှာ …လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါကြောင်း..လူတိုင်းလက်လှမ်းမှီနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတော့မဟုတ်သေးပါကြောင်း
..စုစုပေါင်း ဆယ့်သုံးသိန်းနှင့်အထက် ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါကြောင်း .၁၀၀% ..ပါဝါပျောက်ကြောင်း…. လေဆာနဲ့ပစ်တယ်ဆိုတာက ..မျက်လုံးအလွှာပါးလေးကို ဓါးနဲ့ ရွှပ်ဆို …လှီးပလိုက်ပြီးသကာလ အဖတ်လေးကိုလှန်ပြီး လေဆာနဲ့ပစ်ကြောင်း..ပြီးမှ ..ဓါးနဲ့လွှာထားတဲ့အဖတ်လေးကို ပြန်ဖုံးကြောင်း…အိုင်ကျူဗီးရှင်းက ဆရာဝန်မလေး …လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ရှင်းပြလိုက်တာ…အဖေ တောကိုပြန်ပြေးသွားပါကြောင်း….( သိပ်မလန့်သွားရှာဘူး ) ..အဟိဟိ…
လေဆာနဲ့လုပ်တာတွေက ပါဝါအမြဲတမ်းချိန်းနေတဲ့သူတွေအတွက် အဆင်မပြေဘူး ..
စလင်ဒါအတွက်လဲ မရဘူးလေ ..
ဥပမာ … ကျွန်မမှာ ပါဝါ ၆၀၀ လောက်ရှိပေမယ့် ပါဝါ ၃၀၀ လောက် လျော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်တယ် .. မျက်မှန်လဲ တပ်ရမယ် …
အဲဒီတော့မှတော့ မထူးတော့ဘူးပေါ့ …
ရန်ကုန်မှာ multifocal အတွက် မှန်ဈေးနှုန်းက တော်တော်ကြီးတယ် .. ပါဝါများပြီး ခပ်ပါးပါးလုပ်ချင်ရင် ဂျာမဏီအထိမှာရမယ်လို့ပြောပြီး ၄ သ်ိန်း ၅ သိန်း ၀န်းကျင်ကျမယ်တဲ့ … လျှောက်စုံစမ်းကြည့်တော့ အခု အိုင်ကျူဗီးရှင်းမှာရနေပြီး ၂ သိန်းဝန်းကျင်ကျတယ် .. ဒါပေမယ့် အဲဒါက ဖိုင်ဘာနဲ့ဖြစ်ပြီး ယိုးဒယားမှာ လုပ်တာလို့ သိရတယ် … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၂ သိန်းလောက်သက်သာလဲ မနဲဘူးဆိုပြီး ၂ သ်ိန်းတန် မှန်နဲ့ပဲ လုပ်လိုက်တော့တယ် .. တစ်နှစ်တစ်ခါ လဲနေရတော့ ဈေးကြီးတာ မလုပ်နိုင်လို့ …
ဘာဘရီကိုင်းအနက်နဲ့.. အခြစ်..ဂလဲလ်ခံနိုင်တဲ့မှန်နဲ့.. စုစုပေါင်း.. ၄၀၀နဲ့ကိစ္စပြတ်ခဲ့ကြောင်း..
အရင်ပါဝါထက်.. တဖက်… ၅၀စီတိုးသွားပါကြောင်း..။
မျက်မှန်က.. တပ်လိုက်ရင်.. တသက်လုံးတပ်ပေတော့ပဲ…
မျက်စိကြွက်သားတွေက.. မှန်ဘီလူး(မျက်မှန်)ကြောင့်မြင်သွားရတာမို့.. အပိုမလုပ်တော့ပဲ.. သေသွားတာမို့ပါ..။
ဆရာဝန်ကိုမေးခဲ့သလောက်တော့.. မျက်စိကိစ္စက.. ဆေးစားပြီးမပျောက်နိုင်ပါလို့ဆိုပါတယ်..။
ဗိုက်တာမင်တချို့ကတော့.. မျက်စိကြွက်သားတွေအားသန်စေဖို့.. အထောက်အကူပေးပါတယ်… တဲ့..။
မျက်စိကြွက်သားကို.. ကစားပေးတာကသာ.. အကောင်းဆုံးသော.. Exercise ဖြစ်ပါတယ်…တဲ့..။
ကွန်ပြူတာသမားတွေအတွက်.. 20-20-20 Rule ကအကောင်းဆုံးပါတဲ့..။
Eyestrain Prevention – Diseases and Conditions – Mayo Clinic
A good rule of thumb is to follow the 20-20-20 rule:Every 20 minutes, take your eyes off your computer and look at something 20 feet away for at least 20 seconds.
တူ ကြွားးး အဲလေ ပြောတော့ သများးလည်းးးပြောပြချင်
မနေ့ က စမ်းးးပြီးးး (မျက်စိ)
ဘယ် ၁၀၀ က ၁၀၀ နဲ့ ကျန် ပြီးး
ညာ ၁၅၀ က ၂၀၀ တိုးးး
အကြွေးးး မပေးး နိုင် တဲ့ သူ ဆီက သိမ်းးးလာ တဲ့ အော်ကလေ မှာ မှန် တပ်ဖို့ ပြောတော့
ကိုင်းးး အရှိန်အဝါ ကြည့်ပြီးးးး ၈၀၀ တန် မှန် ထုတ်ပြ
ကေဇီ Fever တက်
နောက် ဆုံးးး ၂၀၀ တန် မှန်ပဲ တပ်ဖြစ်
ဝေ နဲ့ ဆင်တူ
ရ မှ ဓာတ်ပုံ တင်မည်ဖြစ်
ကျွန်မလဲ ကိုင်းအနက်ကြီးလုပ်ခဲ့တာမို့လို့ ဒီတစ်ခါ အကြံတူတွေ ဖြစ်သွားပြီ ..
မနေ့က မျက်မှန်အသစ်ရပြီးနောက်ပိုင်း အနီးကြည့် အိုကေသွားပြီ ..
laptop က စာလုံးတွေကို မြင်ရပြီဖြစ်လို့ စာပြန်ဖတ်တော့မည် …
လေဆာ မြန်မာပြည် လဲ ရပြီ ပြောပါတယ် သူကြီး ..
အဝေးးကြည့် အတွက်ဘဲ လေဆာ နဲ့ ကုလို့ ရတယ် ပြောပါတယ် ..
ကျွန်တော်က အနီးမှုန် ..
ပြောပြချင်တာလေး တစ်ခု ရှိလို့
ကျွန်တော် ထက် အသက်နဲနဲ ကြီးသူ ကျွန်တော့် နဲ အချိန် တူတူနီးပါးမျက်စိ အနီးကြည့် ပြဿ နာ ဖြစ်ပါတယ် … သူက မျက်မှန်တပ်လိုက်ရင် အမြဲ မျက်မှန်တပ်ရလိမ့်မယ် .. မျက်စိ ကြွက်သားဆိုတာ များများသုံးပေးရတယ်အဲ့ဒါဆို ပြန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီး မျက်မှန် မတပ်ပါဘူး .. အဲ့ဒီ့ အချိန် မမြင်ရတာ ကို မှန်ဘီးလူးလေးတစ်လက်ဝယ်ထားပြီး မှန်ဘီလူး ခံ ကြည့်တယ် .. ကွန်ပြူတာ ဆို ဖောင့်ကို ကြီးပြီးး ကြည့်တယ် .. သူက အခု ထိ မျက်မှန်မ တပ်ရပါဘူး ..စာကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်ပါသေး မြင်နေ ရပါသေး တယ် .. ကျွန်တော်က တော့ စာကြည့် မျက်မှန်တပ်လိုက်တာ အခု ဆို မျက်မှန်မပါ စာ ဖတ်လို့ မရတော့ဘူး ..
ပြောချင်တာ တော့ သူပြောတာ မှန်ပုံ ရတယ် .. အနီးကြည့် မျက်မှန် တပ်ရခါနီးသူများ သူပြောသလို အလွယ်မျက်မှန်မတပ်ဘဲ အံတု ကြည့် ကြပါလို့ … သူ့လို ပြန်ကောင်းပြီး မျက်မှန်တပ်စရာ မလို ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါ ..
အဲဒါလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ..
အခုမှ အနီးမှုန်စဖြစ်တဲ့ အဝေးကြည့်လဲ မျက်မှန်မလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို မျက်မှန်ကို အကျင့်လုပ်ပြီး မတပ်ဖို့ အကြံပေးဖြစ်တယ် … သူတို့ကို မျက်မှန်က အကျင့်ဖြစ်သွားရင် မကောင်းကြောင်း ပြောပြဖြစ်တယ် ..
ကျွန်မမျက်စိက ဒီအတိုင်း မျက်မှန်ချွတ်ကြည့်ရင် စာအုပ်ထဲကစာကို မျက်စိနားကပ်ပြီး ဖတ်လို့ရတယ်၊ အပ်ပေါက်ထိုးလို့ရတယ် .. အသက် ၄၀ မပြည့်ခင်က မှန်ဘီလူးတစ်လက်နဲ့ စာကြည့်ခဲ့ရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွန်ပျူတာထဲကစာကို မမြင်ရဘူး.. ကွန်ပျူတာ မော်နီတာက မျက်စိနားကပ်လို့လဲ အဆင်မပြေဘူးလေ …
တချို့ ခေါင်းမိုးတွေက နိမ့်တယ်…ဆိုတဲ့ ဒဿ န လေးကိုတောင် သတိရသွားတယ်…
ကျနော် အခုတလော မျက်မှန်မတပ်ပဲ…
နေလို့ ရနေတယ် ။
ကြည့်ရတာ… မြင်းခွါရွက် တစ်ရက်ခြားတစ်ခါလောက် သုပ် စား… / တို့ စားနေလို့များလား…
.ဗမာမြင်းခွာ (ခပ်သေးသေးလေးတွေ) ကို ကြိတ်ပြီး အရည်ညှစ်သောက်ရင် တစ်လနဲ့ မျက်မှန်လွတ်တယ် ပြောကြတယ် မဝေ။ အမကတော့ မလုပ်ဘူး ပျင်းလို့။
..မမမျှစ်ကြော်…အဲ့တာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ…ဗမာမြင်းခွာကအရည်ညှစ်သောက်ရင် ..အလွန်ကောင်းကြောင်းပါ..အခါးမကြိုက်ရင် သံပုရာသီးနဲ့ သကြားထည့်သောက်.. ..ကိုယ်တွေ့ရယ်…ပြင်ဦးလွင်အိမ်ဘေးမြက်ခင်းထဲမှာ ..အလေ့ကျပေါက်တာလေးတွေ ..ခုထိသောက်ဖြစ်နေပါသေးတယ်..( တရက်ကို ဆယ်နာရီထက်မနည်း …ကွန်ပြူတာကြည့်ပေမယ့် ). ..အသက်သုံးဆယ်ကျော်လာပေမယ့် ..ခုထိမျက်စိကောင်းနေသေးကြောင်း…
အသက် ၁၀ နှစ်လောက်ထဲက ပါဝါတော်တော်များခဲ့တာမို့လို့ ဆေးမျိုးစုံအောင် သောက်ခဲ့ဖူးတယ် .. ဒါပေမယ့် မရခဲ့ဘူး .. အသီးအရွက်လဲ များများစားတယ် ..
အခု ကလေးတွေလက်ထက် (တူမလေး) ကို မျက်စိသွားပြတော့ သူ့မှာ ပါဝါ ၁၅၀ ရှိနေတယ် အသက်က ၁၀ နှစ် .. ဆရာဝန်က မျက်စိပါဝါဆိုတာ ဆေးစားရုံနဲ့ မပျောက်ဘူးလို့ပြောတယ် .. မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ဆိုင်တယ်တဲ့ .. ကလေးကိုတော့ အကျိုးမရှိတဲ့ မျက်စိအသုံးပြုတာတွေကို ရှောင်ဖို့ပဲ ပြောတယ် ….
လေဆာနဲ့ခွဲတာ အကောင်းပျံဖြစ်တယ် .. ဒါပေမဲ့ ကွန်ပြူ တာ အမြဲသုံး၊ စာအမြဲဖတ်နေသူဆို မြမေ ပျံတပ်ရတယ်။ အယင်ထက်စာလျင်တော့ ပါဝါ သိပ်နည်းသွားတာပေါ့။ များသောအားဖြင့် လေဆာနဲ့ခွဲတာ မြမေပါဝါ သိပ်များသူအတွက်သာ ကောင်းတယ်ပြောကြတယ်။ သာမန် တပ်ရယုံနဲ့ အလုပ်မဖြစ်ဆိုလား ဒါမှမဟုတ် မတန်လို့လား တခုခုပဲ။ ပြီးဒေါ့ အဲလို လေဆာခွဲပြီးလျင် ရေကူးတဲ့အခါ ရေကူးမြမေ ပါရမယ်။ နောက်ပြီး နောက်တခါထပ်ခွဲဖို့ သိပ်မလွယ်တော့ကြားတယ်..။ ဦးမာမွတ်သာမီး သန်ဆင်ခိုမ် (ခ) အရှာဘီလေးကို ခြစ်သယ်ဗျာ..
ဟုတ်တယ် အန်ကယ်ကြီးရေ ..
ကျွန်မလဲ စလင်ဒါသမား ..
အခု အသက်ရလာလို့ နဲနဲကျသွားတယ် ..
မျက်စိညောင်းလို့ ဘာကိုမှ အကြာကြီး မကြည့်နိုင်ဘူး ..
ငယ်တုန်း က မျက်မှန်တတ်ချင် တဲ့ ရောဂါ ထခဲ့ဘူးတယ်။
ပါဝါမပါတဲ့ မျက်မှန် တစ်လက် တောင် လုပ်ဖူးတယ်။
အဲဒီလို မျက်မှန် တတ်ရင် ကိုယ့်ဟာ ကို စမတ် ပိုကျ သလိုလို ဘာလိုလို နဲ့။
Bill Gates ရဲ့ စာကြောင် မျက်မှန်မျိုးပေါ့။ lol:-))
ဟိုးတုန်းက အရီး တို့ အချိန် ကလေး တွေ မျက်မှန်တပ်တာ အတော်ရှားတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ ကလေး အတော်များများ မျက်မှန်လေး တွေ နဲ့။
မြန်မာပြည် မှာ ကတော့ နဲနဲ လဲ များများ ချဲ့ပြီး မျက်မှန် ထိုးရောင်း နေတာ မကောင်းဖူး ထင်မိရဲ့။
အရီး ကလေး ကတော့ မျက်မှန် မပါရင် သူ့ မျက်နှာမှာ တစ်ခုခု လို တယ် လို့ ထင်နေပြီ မို့ မျက်မှန် ကို မဖြုတ်ချင်ဘူး လို့ ပြောနေတာဘဲ။
အသက် ပိုကြီး လာချိန်တော့ ဘယ်လို့ ထပ်ပြီး တွေးမယ် မသိ။
ငယ်ငယ်လေးထဲက မျက်မှန်နဲ့ဆိုတော့ ကျောင်းမှာ ဆရာမတွေက စာကြမ်းပိုးလို့ ထင်ကြတယ် .. (အထင်ခံရနဲလားပေါ့နော် ) .. အဲဒီတုန်းက တစ်ကျောင်းလုံးမှာမှ ကျွန်မတို့ ညီအစ်မ ၂ ယောက်ပဲ မျက်မှန်တပ်ရတာ ..
အခုတော့ ကလေးတွေ တော်တော်များများ မျက်မှန်လေးတွေနဲ့ … မျက်စိအသုံးပြုတာများလို့ဖြစ်မယ် ..
ကျွန်မညီမက မျက်မှန်တပ်ထားရတာ မလှဘူးလို့ထင်တဲ့သူဆိုတော့ သူက မြင်ချင်ယောင်အရမ်းဆောင်တယ် … တကယ်တော့ သူကကျွန်မထက်တောင် ပါဝါပိုများသေးတယ် ..
ကျနော် ငယ်ကတည်းက ခုထိ ထနေတာ အဲ့ရောဂါပဲ
မဝေရေ ကျမတော့ မျက်စိကို မညှာမတာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ သုံးနေတာတောင် ခုထိတော့ မျက်မှန်မတောင်းသေးဘူး
ခပ်ငယ်ငယ်က မျက်ရိုးကိုက်လာလို့ တခါတော့ စစ်ဖူးတယ် သူငယ်အိမ်နည်းနည်းစောင်းတယ်ပြောတယ်
မျက်မှန်တခါလားပဲ လုပ်ဖူးတယ် တရက်ပြည့်အောင်တောင် မတပ်ဖြစ်ဖူး
အဲ့ချိန်တုန်းက သာဂဒိုးက ခေတ်စားနေချိန်ဆိုတော့ ကွမ်းရွက်ကို သေချာလေး လချီကပ်လိုက်တာ ပျောက်သွားတာပဲ
အဲဒါလဲ ကံကောင်းခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ ..
မျက်မှန်ကိုတော့ အမြဲမေ့လို့ ၅ လက်လောက်လုပ်ထားပါတယ် ။
ကျနော့မျက်မှန်တွေက ဈေးပေါတော့ အများကြီးလုပ်ထားလို့အဆင်ပြေတယ်
တစ်လက်ကို မှန်ရောကိုင်းရောမှ ၆၀၀၀ ဝန်းကျင်
တကယ်တေည့ အဲဒီကိုင်းနဲ့မှန်နဲ့ကို ဘာညာဗွီးရှင်းတွေမှာ တစ်ပုံစံထဲ ၃ သောင်းနဲ့၎သောင်းလောက်ရောင်းသဗျ ။
ဈေးကွက်မှာ မျက်မှန်ရယ် နာရီရယ်က ဈေးမရှိဘူး ။ပါးစပ်ထဲကအော်လိုက်တဲ့ဈေးဘဲ
မျက်မှန်က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေတော့ ဖြစ်သလိုလုပ်လို့မရတာကလဲ တစ်ကြောင်း ..
အပြင်ဈေးကွက်မှာ ရနိုင်တဲ့ ပါဝါမျိုး မဟုတ်တာလဲတစ်ကြောင်း …
အခုတော့ မျက်မှန်လည်းလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ အဲဒါကြည့်ပြီး ဗိုက်မဆာအောင်ပဲ နေနေရပါတယ် …
ကျနော်လည်း1999 မှာ မျက်မှန်စတပ်ရတာပါဘဲ။
ကျနော်မျက်စေ့ ဒီလောက်ထိ ကြာကြာခံတာကို ကံကောင်းတယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။
ငယ်ငယ်လေးထဲက ရေနံဆီမီးခွက်နဲ့ ညဉ့်နက်သန်းကောင်စာဖတ်လာတဲ့သူကိုး။။
အခုတော့ မျက်မှန်မပါ ရင် မသဲကွဲတော့
မျက်မှန်ကတော့ သိပ်ဈေးကြီးတာ မလုပ်ချင်ပါဘူး
ကျပျောက်မှာ ပျက်မှာ စိုးလို့ပါ
နောက်ရက် တစ်လက် သွားထပ်လုပ်ရအုံးမယ်
တစ်လက် က ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်း ပြုတ်ကျတာ ကားနင်းမိလို့ ကျိုးသွားပြီလေ
အခု ကျွန်မ ပြသနာက ကင်မရာ ချောင်းကြည့်ပေါက်ကနေ မကြည့်တတ်ဘူးဖြစ်နေတယ် .. မျက်မှန်ခံနေလို့ .. မျက်မှတ်ချွတ်ပြန်တော့လဲ အဝေးကို မမြင်ရဘူး ..
နောက်ဆုံးတော့ ဒီအတိုင်း screen ကနေပဲကြည့်ပြီး ရိုက်ရတော့မှာပဲ ..
ဓါတ်ပုံဆရာကြီးတွေလို စတိုင်မျိုး လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ် ..
မဝေ ကြိုးစားပြီး ရအောင်ကြည့်ပါ
အစဘဲ ခက်တာ ကျနော်လဲ မျက်မှန်တပ်ပြီး ကင်မရာချောင်းကြည့် ပေါက် က နေ ကြည့် တာပါ
ကိုထူးဆန်းနဲ့ အကြံတူပါ့။ ဈေးပေါပေါ မျက်မှန်ကိုင်းနဲ့ အနီးကြည့်တွေကို အလုပ်ထဲမှာ တလက်၊ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှေ့တလက်၊ ကွန်ပျူတာရှေ့တလက်၊အိပ်ရာဘေးတလက်၊အိမ်သာထဲ(အဲဒီမှာလည်း စာဖတ်တယ်လေ) တလက် ထားပစ်လိုက်တယ်။ဒီဂရီတိုးရရင် ကိုင်းအဟောင်းကို အနီးကြည့်မှန်ထည့်လိုက်တယ်လေ။
ပုံမှန်ကတော့ Multifocal နဲ့ပဲ နေတယ်။ မျက်မှန်မပါရင် မလတ်သမီးလေးလိုပဲ၊ တခုခုလိုနေသလို ဖြစ်လို့ မနက် လမ်းလျှောက်ချိန်ကလွဲရင် မတပ်ပဲ မနေရဲဘူး။အိုလာတာကို ညာမရတော့။
ကိုယ်လည်း ခေါင်းလေးတမော့မော့ ဖြစ်နေတာ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ ခုမှပဲ သိတော့တယ်။
ကင်မရာတော့ ချောင်းကြည့်ပေါက်က ကြည့်ရတဲ့ဒုက္ခကို မခံနိုင်လို့ စတိုင်မထုတ်ရလဲ နေပါစေတော့လို့ပဲ စိတ်လျှော့ထားလိုက်ရတယ် ……
အင်း ဒီပိုစ့်ကို ကျော်သွားတာ ခုမှဖတ်ဖစ်တယ်
မျက်မှန်က အတော် ကယိကထနိုင်တာကလား ..
တနေ့ကပဲ အမေ့ကို မျက်မှန်သွားစမ်းပေးခဲ့တာ…
ပါဝါပဲမကိုက်တော့တာလား … တိမ်ပဲဖြစ်ချင်တာလား မသိလို့ သွားစမ်းတာပါဗျာ …
အစကတည်းက ယဉ်သကို … စာရေးမတွေ မျက်နှာထိမျက်နှာထားနဲ့
တကယ်ပါ….တိုကင်ယူတုန်း တယောက် ….ဘာစကားပြောမှားတယ်မသိဘူး
ဟဲ့ကောင်မ နောက်တခါ ပြန်ပြောဇမ်း … ဆိုပီး…..
အဲ့မှာ ယိုယိုသေသေလေး ဖစ်တွားတယ်…..အာဟိ…
အဲ… သူ့ စစ်ချက်အပြီးကျမှ …. ကွိုင်တော့တာပဲ…
အမေ့ မျက်မှန်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်ကလုပ်ထားတာမို့ စလင်ဒါရော ပါဝါပါ နည်းနည်းစီတိုးလာပါတယ်တဲ့
အသစ်လုပ်ပါ တဲ့ ….
ရတယ်လေ.. ညီမလေး… ဂိုင်းလေးတွေပြကျိပါ ဆိုပြီး ပြခိုင်းတယ်…
တလွဲတွေပါဗျာ … စိတ်ညစ်တဲ့ယ့် …
ကမ္ဘာကျော် ဘရန်းတွေဖြစ်ပီး တန်ကြေးသောင်းဂဏန်းနဲ့….
စိနပြည်က လား ကီလားပြည်ကလား သွင်းလာမှန်းမသိတဲ့ အတုတွေလေ..
ဒါက အမားနီး လေ… ဒါက ဂူချီလေ … လုပ်နေသေး…. သောက်ရူးတွေ..
အာ့တွေ အဲ့လောက် ပေါမှတော့ ဗျာ … မသိဘူးမှတ်လို့ လုပ်နေတာ…
အာ့နဲ့ အမေ့ လက်ရှိ ဂိုင်းကိုပဲ ပါဝါအသစ်ထည့်ထားတဲ့ မှန်ထည့်မယ် ဆိုပြီး ပြောတယ်…
ဂိုင်းက half frame မို့ ကျိုးချင်ကျိုး နိုင်ပါတယ် တဲ့ …တာဝန်မယူပါဘူး ..တဲ့ … လက်ခံရင် လက်မှတ်ထိုးပါတဲ့ ….
မတတ်နိုင်ဘူး အဲ့မှာ ကျုပ်လည်း ဘီလူးဆိုင်း ၀င်တီးရတော့တယ်..
အေးလို့… နဲ့နေ ကျိုးနေ တဲ့ ဂိုင်းဆိုလည်း ထား
မကျေနပ်ရင်လည်း တက်ကနစ်ရှင်ခေါ်စစ် …
ဂိုင်းအကောင်းကို မှန်လဲတာ ကျိုးရင် တာဝန်မယူဘူးဆိုတော့
ညည်းတို့ဟာ မလွန်ဘူးလား ဆိုပီးတော့ပေါ့ဗျာ…
ပြော ငါဘယ်သူနဲ့ စကားပြောရမတုန်းဆိုတော့…
အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး အစ်ကိုရယ် တဲ့ ညီမတို့က ဖြစ်သွားမှာ စိုးလို့ပြောတာပါတဲ့…
ခက်စ်တယ် တာဝန်ယူမှု မရှိတဲ့ စိတ်ဒတ်တွေ…
အေးလို့ … ဂိုင်းအကောင်းကို မှန်လဲတာ ကျိုးတယ် ဆိုရင်တော့ …
ငါဂျာနယ်မှာ အဲ့အကြောင်း အကုန်ရေးပစ်မယ် လို့ ပြောပစ်ခဲ့တယ်…
အာ့ … သာထိန်းလူယုံထင်ပါတယ်… တယောက်ထွက်လာပီး …
ညီရယ် တဲ့ အစ်ကို တာဝန်ယူပါတယ်.. ဘာညာပေါ့ဗျာ ..
လာပြောတယ် .. ကျနော်လည်း လူလိုပြောရင် လူလို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြန်ပြောပါတယ်ဗျာ…
မျက်စိနာလို့ အိမ်နေရင်းအ၀တ်နဲ့ ထွက်လာတဲ့အမေ့ကို အဲ့လိုမောက်မာတဲ့ စာရေးမကိုတော့ ၁ခွန်းပြောခဲ့တယ်..
ဟတ်ကောင်မ ဟိုးတုန်းက ငါ့အမေ ဒီမျက်မှန်ဆိုင်မှာ မျက်စိစစမ်းတော့ … နင့်အဖေတောင် နင့်အမေကို မဒချိရသေးဘူးမှတ်ထား..လို့ နင်ထမင်းစားတာ ငါ ဆွမ်းတော်တင်သလောက်တောင် မရှိသေးဘူး …ဆိုပီး….
မပြောချင်ပါဘူးဗျာ… မပြောလည်း မသိ ၀န်ထမ်းတွေများ….ရိုင်းတတ်လွန်းလို့ ..
အခုဟာက.. မိတ်အင် ချိုင်းနားတဲ့..။
အီတလီဂိုင်းတွေက.. ဂိုင်းအရင်းနားပတ္တဆက်ကလေးက.. စပရင်လေးနဲ့မို့.. ညှိလို့ရတယ်..။
သေချာသပေါ့ .. သဂျိုင်ခီးရယ်..
ဟန်းမိတ်လား စက်နဲ့ ရိုက်ထုတ်ထားသလားတောင် တိဝူးလား..
အဲလိုကို ခံခဲ့ရပါတယ် …
မျက်မှန်ကိုင်းလဲထားတာ လပိုင်းပဲရှိသေးတာ အကောင်းအတိုင်းရှိနေတာမို့လို့ မှန်ပဲအသစ်လဲမယ်ဆိုတာကို တာဝန်မယူဘူးတဲ့လေ .. သူတို့ဆိုင်မှာ ၀ယ်ထားတာ မဟုတ်လို့တဲ့ … ကိုင်းကျိုးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့မှန်ထိသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကလဲ တာဝန်ယူပေးရပါမယ်တဲ့ .. စကားပြောရတာ အပေါက်လမ်းမတည့်ဘူး ..
အဲဒါနဲ့ အသစ်လုပ်လိုက်ရတယ် .
Charmant , made in Japan လို့တော့ ရေးထားတာပဲ … ကိုင်းချည်းပဲ ၃ သိန်းကျော်ပေးရတယ်ဆိုတော့ အစစ်လို့တော့ထင်ရတာပဲ .. ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့မို့ တပ်ရတာအဆင်ပြေတယ် ..
အကျင့်ပဲ ပါနေလို့လားတော့မသိ .. မျက်မှန်လဲပြီးတာတောင်မှ ခေါင်းတမော့မော့ ဖြစ်နေတုန်း ..
ကျောက်စ်လည်း ဒီပို့စ်ကို ကျော်သွားသဂိုး…
၇-တန်းလောက်ကတည်းက မျက်မှန်တပ်ခဲ့ရသူမို့ မျက်မှန်အကြောင်း ပြောမကုန်…
အိပ်ရာထလို့ မျက်မှန်ရှာမတွေ့ရင် အတော်အသည်းငယ်ရတယ်… ရေတောင် သောက်မဝင်…
မျက်မှန်တပ်လျက် ရေပန်းအောက်ကိုဝင်… ရေချိုးမိတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်…
အဆိုးဆုံးက အာဘွားပေးတဲ့ အချိန်ပဲ … ဟမ်… ခလေးတွေကိုပြောတာပါခင်ဗျ…
ဒီကြားထဲ လက်မြန်တဲ့ခလေးက မျက်မှန်ကို ဆွဲထားရင် ငို၍ ရယ်၍မရသော မျက်နှာနဲ့…